UMvelisi - iSuiyuan New Energy Technology Co., Ltd.
I-Shenxian Shuiyuan entsha yeThekhnoloji yezaMandla Co, Ltd. eyasekwa ngo-2000, ibekwe kwiphondo Shandong, thina mveliso umenzi ezikhethekileyo kwimveliso Dibenzoylmethane (DBM) kunye furfural. Njengenye yezona mveliso zinkulu zehlabathi zeDibenzoylmethane (DBM) mveliso onomthamo wonyaka weetoni ezili-10 000, njengenye yezona mveliso zinkulu ehlabathini ezinomthamo wonyaka weetoni ezingama-30,000. Sinezinto ezine zesebe.
It is a mveliso ka-83,916 square metres kuquka 80,000 square metres workshop space.Company unabasebenzi abangaphezu kwama-200, amandla zobugcisa olomeleleyo, unalo ngobungcali inxaxheba kuphando imveliso entsha kunye nophuhliso iqela lobugcisa, kwaye ugcine intsebenziswano ngokusondeleyo kumaziko amaninzi zasekhaya ezenzululwazi zophando. Siyabambelela kwingcinga yenzululwazi nethekhinoloji kunye nokukhuselwa kwendalo esinganyanzelekanga somlilo esincedisayo se-PVC sokuzinzisa ubushushu iDibenzoylmethane (DBM) kunye nefuraldehyde kunye nemveliso yeemveliso ezinoboya kunye nentengiso yenkampani yokuvelisa amandla eetoni ezingama-40,000, inkampani inemveliso yetekhnoloji ephambili kwihlabathi Umgca kunye nezixhobo zemveliso ezinkulu zeDibenzoylmethane (DBM), umgangatho wemveliso ufikelele kwinqanaba eliphezulu lehlabathi.
Iimveliso ikakhulu zisebenzisa i-methanol kunye ne-acetic acid evela kwizikhwebu zombona, ezisetyenziswa kwimveliso ye-Dibenzoylmethane kunye ne-furfural, uluhlu olubanzi lokusetyenziswa, ikakhulu i-furfural alcohol resin yeyeza kunye nemveliso yeekhemikhali entle kwimimandla. Iimveliso zendalo zingasetyenziswa kwimveliso yamayeza, I-furfuryl yotywala, iziqholo, iincasa, iizimba kunye nezinye iimveliso.
I-Dibenzoylmethane isetyenziswa ikakhulu njengesiqinisi seplastiki kwizixhobo zokuhambisa iibhotile zamanzi, iiseti zokufaka, imibhobho yokuphambukisa, njl. Okwangoku, ngemveliso yonyaka yeetoni ezili-10 000, ngaphezulu kwe-95% yeemveliso zithunyelwa eMelika, kumazwe aseYurophu, UMzantsi Korea, iJapan, i-Bhritane, iMexico, njl njl Sinabathengi kumazwe angaphezu kwama-40 inkampani yethu iye yaba yinkokheli kwishishini laseDibenzoylmethane nakwicandelo lezomzi eChina.